लाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना, तपाईले देख्नुभएको त छैन ? – List Khabar
Home / समाचार / लाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना, तपाईले देख्नुभएको त छैन ?
admin July 17, 2021 समाचार Leaveacomment 56 Views
काठमाडौँ । यसमा केही शङ्का नै छैन कि जब मानिस सुत्छ त निन्द्रामा कुनै न कुनै सपना देखेकै हुन्छ । हुन त यो कुरा अलग हो कि केवल रातमा सुतेको समयमा नै होइन दिनमा सुतेको समयमा पनि व्यक्ति कुनै न कुनै सपना देखेर सुतेकै हुन्छ ।
कुनै वयक्तिका सपना त यति अजिब हुन्छन् कि त्यसलाई देखेकै हो भनी सत्य मान्न पनि मुस्किल हुन्छ । यानी यसलाई प्रस्टसँग भन्ने हो भने कुनै मान्छे यस्तो सपना देख्छन् कि जसलाई सुनेर हरेककोई हैरान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सपनालाई बुझ्नु मानिस भन्दा परको कुरा हो ।
यहीँ यदि ज्योतिषशास्त्रको कुरालाई हेर्ने हो भने कुनै सपना यस्ता पनि हुन्छन् कि जो लाख मानिसहरुमध्ये कुनै एक मानिसलाई मात्र आउँदछ ।
यस्तो सपना व्यक्तिलाई तब आउँछ जब उसको जीवनमा करोडपति बन्नेको योग काफी मात्रामा प्रबल हुन्छ । यदि तपाईलाई पनि यस्तो कुनै सपना आएको छ भने सम्झनुहोस् तपाईको पनि करोडपति बन्ने योग आएको छ ।
यसको मतलब यो हो कि तपाईलाई धनि बन्न देखि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । शास्त्रअनुसार यस्तो सपनाको मतलब हुन्छ कि तपाईको जीवन खुब कामयाबी र सफलताले भरिपुर्ण हुनेवाला छ। त्यसोभए आउनुहोस् जानौँ ति सपना कुन् हुन् त ?
ज्योतिष शास्त्रको अनुसार यदि तपाई सपनामा पहाडबाट बगिराखेको भरना देख्नुभएको छ अथवा यो भनोँ कि तपाईलाई त्यो सपना एकदम प्रस्टसँग देखियो र त्यस झरनाको सपनामा पनि तपाई आफै त्यस झरनाको पानी पिइराखेको देख्नुभएको छ भने सम्झनुहोस् कि तपाईको जीवन अगाडि बढ्ने सन्देश मिलिराखेको छ भनेर ।
यसको मतलब यो हो कि यदि तपाई कुनै बाधाँमा उल्झनुभएको छ वा कनै एउटा निर्णय लिन सक्नुभएको छैन भने तपाईलाई यस्तो सपना आउन सक्छ । यसको मतलब यो हो कि थपार्यको अन्तरआत्मा तपार्यलाई भित्रैबाट अगाडि बढ्नको लागी प्रेरण दिईराखेको छ ।
तपाईले केवल यस सपनालाई बुझ्नु जरुरी छ । यसबाहेक यदि ज्योतिष शास्त्रको अनुसार यदि तपाईलाई यस्तो सपना आएमा मतलब हुन्छ कि सपना पछि तपाईको गर्ने कार्यमा जरुर सफलता मिल्नेवाला छ।
यो सपना पछि, कोहिले पनि तपाईंको जीवनलाई अगाडि बढ्न बाट रोक्न सक्दैनन्। हो, यसको मतलब यो पनि हुन्छ कि तपाईंले जीवनमा प्रगति निश्चित गर्नुहुनेछ।
यदि हामी सिधै भन्यौं भने यो सपना वास्तवमै धेरै शुभ हुनेछ । यस सपनाको मतलब हुन्छ कि तपाई धनवान भन्ने बाटोमा दौडिरहनुभएको छ।
यदि तपार्ई पनि सुतेको समयमा यस्तो सपना देख्नुभएको छ भने यसलाई अन्देखा गर्ने कोशिश नगर्नुहोला । किनकी यो सपना तपाईको सफलताको सङ्केत हो। यस्तो सपना लाखौँमध्ये कुनै एक मानिसले मात्र देख्ने गरेको पाइन्छ।
Previous देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचारीहरु रि हा हुनु राम्रो संकेत होइन : केपी ओली
Next खाली खुट्टा हरियोमा हिड्दा हुन्छन् यस्ता चमत्कारी फाइदै फाइदा